Manavaka ny marina amin’ny anganongano
“Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; ary hampiala ny sofiny amin’ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin’ny anganongano” 2 Tim. 4:3,4
Efa betsaka ny voalaza momba ny firotsahan’ny Fanahy MAsina, ary ho an’ny sasany dia lazaina fa fahavoazana ho an’ny fiangonana izany. Ny fiainana mandrakizay dia ny fandraisana ireo zavatra mahavelona ao amin’ny Soratra Masina ary ny fanaovana ny sitrapon’andriamanitra. Izany no mihinana ny nofo sy misotro ny ran’ny Zanak’Andriamanitra. Ho an’ireo izay manao izany dia haseho azy ny fiainana sy tsy fahafatesana avy amin’ny filazantsara, satria fahamarinana sy fiainana, fanahy sy fiainana ny Tenin’Andriamanitra. Tombontsoa ho an’ireo izay mino an’i Jesosy ho Mpamonjy ny tenany manokana ny mihinana ny Tenin’Andriamanitra. Ny hery miasa manginan’ny Fanahy Masina no mahatonga ny Teny, ny Baiboly, fahamarinana tsy mety maty, hanome nofo sy hozatra ara-panahy ny mpandinika feno fiainam-bavaka.
“Dinihinareo ny Soratra Masina”, hoy i Kristy, “satria ataonareo fa ao aminy no anananreo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy” Jao. 5:39. Ireo izay mangady any ambanin’ny tany no hahita vato sarobidy miafin’ny fahamarinana. Momba ny mpandinika mahatoky ny Fanahy Masina. Manazava ny Teny ny fahazavany, manoratra ny fahamarinana ao an-tsaina ary mahita ny hasarobidiny vaovao sy madio. Feno fiadanana sy fifaliana tsy mbola nisy toa azy ny mpandinika ny Soratra MAsina. Tsapany loatra ny hasarobidin’ny fahamarinana. Fahazavana vaovao sy avy any an-danitra no manazava ny Teny, manazava izany, tahaka ny hoe mihosobolamena ny litera tsirairay avy. A,driamanitra mihitsy no miteny amin’ny saina sy fo, mahatonga ny Teny ho fanahy sy fiainana.
Manandratra ny fo ho any amin’Andriamanitra ny mpandinika marina ny Tenin’Andriamanitra sy mitalaho ny fanampian’ny Fanahy Masina. Ary hahita haingana izy fa izay nitarika azy ho amin’ny fanamabarana feno anganongano avy amin’ireo atao hoe mpampianatra manana fampianarana tsy miorina sy mangozohozo dia tsy mifototra amin’ny Tenin’Andriamanitra velona. Ireo fampianarana ireo dia noforonin’ny sain’olombelona izay tsy nianatra akory ny lesona lehibe voalohany: ao amin’ny Tenin’Andriamanitra ny Fanahin’Andriamanitra sy ny fiainana . Raha mba nandray tao am-po ny zava-panahy tao amin’ny Tenin’Andriamanitra mantsy izy ireo, dia ho nahita fa tsy ilaina ary tsy misy antony ny ezaka rehetra hahazoana zava-baovao mba hamoronana fientanentanana. Mila ny mianatra mihitsy ny fitsipika voalohan’ny Tenin’Andriamanitra izy ireo.